China Transparent French Square Mini 2oz Wine Glass Juice Glass Bottle ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Cui Can Glass
ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော French Square Mini 2oz ဝိုင်ဖန်ခွက် အဖုံးပါသော ဖျော်ရည်ဖန်ပုလင်း
စက်မှုအသုံးပြုမှု- အဖျော်ယမကာများ၊ ဖျော်ရည်များ၊ ဝိုင်များ
မူလနေရာ၊မူလနေရာ- Jiangsu၊ တရုတ်နိုင်ငံ
အမှတ်တံဆိပ်: Cui Can
ကုန်ပစ္စည်းအမည်- အဖျော်ယမကာ ဖန်ပုလင်း
အသုံးပြုပုံ- ဝိုင်၊ ဖျော်ရည်၊ နို့၊ စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုသည်။
အင်္ဂါရပ်များ- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ အစားအသောက်အဆင့်၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အရောင်- ပြထားသည့်အတိုင်း ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ကြည်လင်သော ဖန်ရည်ဖျော်ရည်ပုလင်းများသည် သင့်ဖျော်ရည်လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်ကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။၎င်းကို အရည်အသွေးမြင့် အစားအစာအဆင့် ဖန်ခွက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ခဲ-မပါရှိသောကြောင့် ၎င်းကို သိမ်းဆည်းပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်သုံးနိုင်သည်။
ယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲ အလွယ်တကူ အားဖြည့် သောက်သုံးနိုင်သည်- ရေခဲသေတ္တာ ရေပုလင်း၊ နို့ပုလင်း၊ ဖျော်ရည်ဖန်ခွက်၊ ဝိုင်ဖန်ပုလင်း သို့မဟုတ် ရိုးရိုးရေပုလင်းအလှဆင်အဖြစ် အသုံးပြုပါ။
အရည်ဖျော်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း- အိမ်လုပ်ဖျော်ရည်ပြုလုပ်ရန် ပြီးပြည့်စုံသော ဖန်ပုလင်းဖြစ်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသောဖန်ခွက်သည် သောက်စရာ၏အရောင်ကို ကောင်းစွာပြသနိုင်သည်။
ခရီးသွား-ထူးခြားသောဒီဇိုင်း၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်၊ နေ့လယ်စာအိတ်များ၊ အားကစားခန်းမများနှင့် ကျောပိုးအိတ်များတွင် ထုပ်ပိုးရန် စံပြပုံစံနှင့် အရွယ်အစား။ရေကူးကန်များ၊ ကမ်းခြေများ၊ အားကစားခန်းမများ၊ ကျောင်းများ၊ အလုပ်ခွင်များ၊ စခန်းချခြင်းနှင့် တောင်တက်များသို့ အိမ်လုပ်အဖျော်ယမကာများ ယူဆောင်လာရန် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလိုင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး၊ ပို့ကုန်အတွေ့အကြုံနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝပြီး နိုင်ငံပေါင်း 100 ကျော်သို့ တင်ပို့ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ မှာယူမှုများ၏ 80% ၊ မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်အမည် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော French Square Mini 2oz ဝိုင်ဖန်ခွက် အဖုံးပါသော ဖျော်ရည်ဖန်ပုလင်း
အသုံးပြုမှုအမည် အဖျော် ဖန်ပုလင်း
စွမ်းရည် အဖျော် ဖန်ပုလင်း
MOQ 2000 ကျပ်
ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ T/T၊ 30% ကြိုတင်ငွေ၊ လက်ကျန်ငွေပေးချေမှု
ကြာမြင့်ချိန် သင်၏အပ်ငွေလက်ခံရရှိပြီးနောက် 15-35 အလုပ်ရက်
1. အခြားပေးသွင်းသူများအစား ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အဘယ်ကြောင့် ဝယ်ယူသနည်း။
ထုတ်ကုန်များ ကွဲပြားပြီး လုပ်သားများသည် အတွေ့အကြုံရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် စီမံရေး အလုပ်ရုံများရှိသည်။
စီမံဆောင်ရွက်နေသည့် နည်းပညာ။အရည်အသွေးကောင်းပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာပါတယ်။
2. သင်သည် ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Jiangsu ပြည်နယ်၊ Xuzhou တွင်ရှိသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်။Matte၊ စခရင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပုံကြမ်းများ၊ ကြေးဝါ၊ ထွင်းထုခြင်း စသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ထည်ပစ္စည်းများအားလုံးကို မတူညီသောအလေးချိန်နှင့် မတူညီသောအနုပညာလက်ရာ သို့မဟုတ် အလှဆင်မှုများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် စျေးနှုန်းကတ်တလောက်မရှိပါ။
5. ဈေးနှုန်းများကို ညီတူညီမျှ ထိန်းညှိပေးပါသလား။
အရေအတွက်၊ အလှဆင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
6. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ အခမဲ့နမူနာများကို ရနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အခမဲ့နမူနာများ ပေးဆောင်ရန် ပျော်ရွှင်ပါသည်။နေ့ချင်းပြန် ပို့ဆောင်ခ ကျခံရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
ယခင်- 2021 အသစ်ရောင်းမည် 250ml 500ml ပါးစပ်ပြားချပ်ချပ်ဖျော်ရည် ကော်ဖီဖျော်ရည် ဖန်ပုလင်း
12 အောင်စ ဖန်ဖျော်ရည်ပုလင်း
Cold brew ကော်ဖီပုလင်း လက်ကား
ဖျော်ရည်အတွက် အဖုံးပါသော ဖန်အိုးများ
Eiffel Tower Shape 205ml Glass Wine Whisky Col...
345ml 11.6oz 518ml 17.5oz စိတ်ကြိုက် Airtight Wine...
50ml 100ml 200ml 250ml 350ml 500ml အအေးချက်နည်း C...
155ml 295ml 355ml 505ml Empty Frosted Juicy Bot...
ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ပန်းရံအိုး ဖန်အိုးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်...
100ML 200ml 250ml 350ml 500ml အပြားပုံစံ နှင့်...
ဘီယာ ဖန်ပုလင်း, Reed diffuser ပုလင်း, Glass Bbq Sauce ပုလင်းများ, ဖန်ပုလင်းအချိုရည်, ဖန်ရည်ပုလင်းများ, ဖျော်ရည်အတွက် ဖန်အိုး,